Ra’isul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug oo maanta kusii jeeda magaalada… | Allbanaadir.com
Home NEWS Ra’isul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug oo maanta kusii jeeda magaalada…
Ra’isul Wasaare Rooble iyo Madaxweynaha Galmudug oo maanta kusii jeeda magaalada…
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wefdi uu hogaaminayo ayaa maanta lagu wadaa in ay gaaraan magaalada Baydhabo ee caasimada KMG ee maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa sidoo kale maanta lagu wadaa in magaalada Baydhabo isna gaaro Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay.
Magaalada Baydhabo waxaa ka socda qaban qaabo balaaran oo loogu diyaar garoobayo soo dhaweynta wefdiga ay kala hogaaminayaan Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Galmudug ee kusii jeeda Galmudug.
Madaxdan kusoo jeeda magaalada Baydhabo iyo Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa in kulamo kala duwan yeeshaan, waxaana inta badan kulamadan diirada lagu saari doonaa arimaha doorashada iyo dar dargalintooda.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa shalay galinkii dambe ku laabtay magaalada Baydhabo kadib safar labo cisho ah uu ku sugnaa magaalada Kismaayo halkaas uu kulamo hoose kula soo qaatay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Previous articleDowlada Soomaaliya oo diiday in la baaro tacadiyada xuquuqada aadanaha ee Itoobiya
Next articleGolaha Wadatashiga Qaran oo kulan deg deg ah isugu imaanaya